इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरैले घ’ट्यो सुनको भाउ , तोलाको कतिमा झ’र्यो ? – Ramailo Sandesh
काठमाडौँ– नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।मंगलबारको तुलनामा ९०० रूपैयाँले घटेर आज बुधबार ‍छापावाला सुन प्रतितोला ८५ हजार ६०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै तेजाबी सुन आज ८५ हजार १५० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ । चाँदी आज प्रतितोला २० रूपैयाँ घटेर ११९५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
दुई हप्तासम्म दहीमा मिसाएर खानुहोस् मात्र यी चिज, पत्तै नपाई घट्नेछ तौल
यस लापरवाहीका कारण, शरीरमा कुन रोगको घर बसेको हुन्छ मानिसलाई पत्तै हुँदैन। जब यसले एक गम्भीर रूप लिन्छ यस्तो अवस्थामा पनि बिरामी भइरहेको छ भन्ने कतिलाई थाहा नै हुँदैन। आज हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो समस्याको बारेमा बताउन जाँदैछौं कि आधाभन्दा बढी मानिसहरू चिन्तित छन्।
बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा हुन्छन् यतिधेरै फाइदा, जानी राखौँ
साबधान ! खाली पेटमा कहिल्यै नखानूस् यी खानेकुरा, विष बन्न सक्छ
केवल दिमागमा राख्नुहोस् कि यसको लागि तपाईंले आफ्नो खाना र पेयमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए त्यो टिप्स् के हो भनेर थाहा पाउनुहोस् ?
अब तपाईले एक कचौरा दही लिनुहोस् र यसमा एक चम्चा अघि पिसेको जीरा पाउडर दहीमा हाल्नुहोस् । दिमागमा राख्नुहोस् कि यी दुई सामग्री बाहेक केहि पनि नमिसाउनुहोस्। यो घरेलु उपाय तौल घटाउन को लागी धेरै प्रभावकारी छ।
पानी परेपछि प्रदूषण घट्यो, ठूलो पानी नपरेकाले छ्याङ्गै खुल्न सकेन
कोरियामा मृत्यु भएका गगनकी प्रेमिकाको भावुक स्टाटस !